Qaramada midoobay doorashadu bisha 6aad waa iney dhacdaa.
Posted by admin on May 13 2011 12:06:16
New York:(hiranstate.com)-Qaramada Midoobay oo mar kale ku celisay in doorashada la qabto bisha 6aad halka ay caro kala dul dhaceen Farmaajo oo walito Mareykanka ku sugan.
New York:-Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay Madaxda TFGda in ay si deg deg ah u xaliyaan qilaafaadka u dhaxeeya islamarkaana la qabto doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ka hor bisha Augusta oo ah xiliga ay ku eg-tahay waqitiga dowlada.
War murtiyeed maanta kasoo baxay Golaha Amaanka ayaa waxaa si kulul mar kale loogu dhaleeceeyay hogaaka sare,taasi oo ay si gaar ah u tilmaameen inay dib u dhac balaaran ay u keeni karto Axdigii Jabuuti ee lagu soo dhigay dowladda KMG ah.Golaha amaanka ayaa soo dhaweweyey in doorashada lagu qabto Magaalada Muqdisho bisha June taasi oo uu sheegay in loo baahan yahay inay ka qeyb qaataan dhamaan Shacabka Soomaaliyeed.
Golaha Amaanka ayaa waxaa uu ugu baaqay Beesha Caalamka, Qaramada Midoobay iyo dhamaan Ururada Caalamiga ah iney taageeraan kulan lagu wado inuu ka dhaco Muqisho si looga wada tashto waxyaabihii kasoo baxay kulankii wada tashiga ee ka dhacay Magaalada Nairobi kaasi oo ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobay.War murtiyeedka oo aad u hdeeraa waxaa lagu soo gaba gabeeyay in dhamaan Soomaalida oo dhan ay Mas’uuliyad iska saaraan ka shaqaynta howlaha nabadda, dib u hishiisiinta si looga baxo waqtiga kala guurka.
Qaramada midoobay ayaa si weyn u taageertay qudbad uu halkaasi ka jeediyey wakiilkooda Mr Mahiga oo Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay u gudbiyay dhibaatooyinka iyo is qab qabsigia siyaasadeed ee iminka ka taagan Madaxda dowladda KMG Soomaaliya taasi oo uu ugu baaqay in lagama maarmaan ay tahay si deg deg ah loo helo qaab looga bixi karo jahwareerkaan, si taasi u dhacdana waa in ay doorasho dhacdo.
R/wasaare Farmaajo oo walito ku sugan Mareykanka ayaa war murtiyeedkaan lagu soo dul saaray iyadoo lagu wado inuu dib ugu laabto Mogdisho sida ugu dhaqsiyaha badan. Farmaajo kama helin wax soo dhaweyn ah Soamlida waqooyiga America xitaa siyaasiyiin Mareykan ah oo horey safarkisii hore markii uu yimid aad ula dhacsanaa waxaa lagu soo waramayaa iney u arkaan nin dhalinyaro ah oo ay ku qaldameen maadama isagoo ku noolaa wadan ay dimoquraadiyada wax weyn ka tahay oo doorasho lagu kala baxo uu isagu qeyb ka yahay qalalaasaha maanta wadanka soamliya ka taagan isagoo isku dhejinaya xukunka.
Waxaa kale oo iyaduna in la xasuusto u baahan Somalida oo ah dad aad u wanagsan safarkii kan ka horeeyena si weyn ugu soo dhaweeyey Washington hada arintaasi ma jirto waxeyna u arkaan Farmaajo iyo golahiisa wasiirada oo qurbo joog u badan iney meel uga dhacayaan Somalida qurbaha oo hada loo arko kuwo xukun jecel oo aan dan ka laheyn dalka iyo dadka xitaa hadey dhibatadii wadanka ka dhacday mudo ka maqnaayeen.
Mar aanu xaleyto xiriir la sameynay washington waxuu u muuqaal ekaa nin ay isaga iyo jaaliyada waqooyiga America kala tageen. inkastoo laga yaabo si loogu ceeb qariyo xaflad yar loo sameeyo sida ay tiro yar ku fikirayaan.